Guddoomiyihii Shebekadda Berebera News Oo Xabsiga Loo Taxaabay iyo Jawaabta Taliyaha Qaybta Booliska Saaxil | Araweelo News Network (Archive) -
Guddoomiyihii Shebekadda Berebera News Oo Xabsiga Loo Taxaabay iyo Jawaabta Taliyaha Qaybta Booliska Saaxil
Berbera(ANN)Guddoomiyihii shabakeda wararka ee Berbera News Mr Maxamed Siciid Cabdilaahi [Xarago], ayaa xabsiga loo taxaabay maanta, isagoo ku sugnaa xarunta gobolka Saaxil ee Berbera l, ka dib markii uu gacantiisa ku soo qabtay taliyaha CID-da gobolka Saaxil Ibraahim Dhegosayn. Wariyaha
ayaa wakhtiga la xidhay ku sugnaa xaafada Moscow ee magaalada Berbera, lama garanayo sababta iyo ujeedada ka danbaysa xadhigiisa, waxaana gacantiisa ku kexeeyey taliyaha CID-da, oo si aan sharciga waaqsanaynayn, isla markaana ka soo horjeeda xuquuqda bina’aadanimada, isagoo ula dhaqmay si foolxun oo ku jeexjeexay shaadhkii uu xidhnaa wariyuhu.
Taliyaha Qaybta Booliska gobolka Saaxil Col. Cabdiraxmaan Ibraahin(Cabdi Dheere) oo shebekada wararka ee Araweelonews wax ka weydiisay xadhiga weriyahaa ee sharcidarada ah iyo sababta loo xidhay ayaa yidhi, “Adeer arrinta weriyahaa iyo sababta xadhigiisa hada ayaan gacanta ku haynaa, mana jiraan wax aan hada kaaga sheegi karaa ee horta aan helo warkiisa.”
Warar kale oo xadhiga weriyahaa la xidhiidha oo ay shebekada wararka ee Araweelonews heshay ayaa sheegaya in amarka xadhiga weriyahaa uu bixiyay xaakin waqtigii maamulka Rayaale ku amar ku taaglayn jiray magaalada Berbera oo u muuqan jiray xaakin jooga waqtigii naasiga, isla markaana xukuno iskaga ridi jiray dadka. Kaas oo dhawr sanno ka hor isagoo maqan weriyahaa ku xukumay xadhig.
Guddomiyaha Shebekada Berbera News Maxamed Siciid C/llaahi wuxuu hawlo shaqo u joogay magaalo madaxda gobolka Saaxil ee Berbera, ilaa hadana si dhab ah loo oga dambiga uu galay ee lagu haysto iyo cida ka dambaysa xadhiigsa ee amartay in la xidho.